Uniquezọ njem njem atọ pụrụ iche na Galicia | Akụkọ Njem
na ụzọ ụkwụ Ha aghọọla ejiji, ugbu a ọtụtụ mmadụ, ọbụlagodi na-enweghị ndị egwuregwu egwuregwu, kpebiri ịme ụzọ dị iche iche iji chọpụta akụkụ dị nso n'ụlọ ma ọ bụ n'oge ezumike ha. Ọ bụ ya mere taa anyị ga-ekwu maka ụfọdụ ụzọ mara mma na ndị ama ama na Galicia.
Ala a juputara na ebe ichoputa na nkuku ndi mara mma na-ewetara anyi ihe ozo anyi g’eme, mgbe anyi detutasiri gastronomy ya, ileta Santiago de Compostela ma obu isa mmiri n’akuku osimiri. Zọ njem ndị ahụ na-adị oke mkpa ma enwere ụfọdụ nke nwere ike inyere anyị aka ịchọpụta eke eke juputara na mma nke ahụ ga-eme ka anyị ju anyị anya.
1 Camiño dos Lighthouses
Camiño dos Lighthouses
Wayzọ nke Lighthouses, dịka mmadụ ga-asị sụgharịa n'asụsụ Spanish, bụ ụzọ na-agba ọsọ n’etiti ndi bi na Malpica na Finisterre, n’ebe ugwu Galicia na ụsọ oké osimiri. Ha abụghị ihe ọzọ ma ọ bụ ihe na-erughị kilomita 200 nke ụzọ, ya mere, ọ gaghị ekwe omume ịme ya n'otu ụbọchị, mana e kewara ụzọ a n'ime ọkwa asatọ ka ndị mmadụ wee nwee ike ịnụ ụtọ ya n'ụzọ zuru oke ụbọchị dị iche iche. Ọ bụ ụzọ dị mma, na mpaghara nke ama ama Costa na Morte, ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ ihu ala mara mma na nke ọhịa, na-agabiga n'ụsọ osimiri, ọnụ ọnụ ugwu, ime obodo na n'ezie ọkụ niile nke mpaghara ala a.
La akpa ogbo ọ na-esi Malpica gawa Niños, jiri kilomita 21,9. Oge a na-ahapụ obodo Malpica na ọdụ ụgbọ mmiri ya ileta osimiri isii dị iche iche na Punta Nariga Lighthouse. Na nke abụọ, ị ga-esi Niñóns gaa Ponteceso, na-agafe na coves na ọnụ ọnụ ugwu Cabo Roncudo ya na ọkụ ya. Na nke a ogbo a ngụkọta nke kilomita 26 na-mere. Na nke atọ, ị ga-esi na Ponteceso gaa Laxe maka kilomita 25,2, na-enwe obi ụtọ na Estuario do Anllóns na mbido. N'oge a ị nwere ike ịhụ ihe ochie ochie abụọ dị oke mkpa, Dolmen de Dombate na Castro A Cibda. Agba nke anọ si Laxe gaa Arou, maka kilomita 17,7, bụ ọkwa kachasị dị mkpụmkpụ. N'oge a ị nwere ike ịga Camelle na Playa de los Cristales. Agba nke ise si Arou gaa Camariñas, na Costa da Morte yana ụzọ nke 22,7 kilomita. N'oge a ị nwere ike ịga leta ọkụ Vilán na ebe a na-eli ozu Bekee. Oge nke isii kachasị ogologo na kilomita 32 wee si Camariñas gaa Muxía. Oge a na-agwụ na Santuario da Virxen da Barca na njem ncheta maka ọdachi Prestige. Oge nke asaa si Muxía gaa Nemiña ma bụrụkwa nke kachasị sie ike n'ihi ala siri ike, yana kilomita 24,3. Oge nke asatọ na nke ikpeazụ si Nemiña gaa Cape Finisterre, yana ụzọ 26,2 kilomita. Site na usoro asatọ a, anyị ga-agagharị nnukwu akụkụ nke ugwu Galician dị n'akụkụ ugwu.
Nke a ụzọ bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na a maara nke ọma, emi odude ke Mpaghara Rías Baixas n'ógbè Pontevedra. Routezọ a na-agafe Osimiri Armenteira, nke na-esote ya enwere igwe igwe na-arụ ọrụ ekele maka ike nke mmiri na taa nwere ọrụ njem nleta na ihe nketa. Nke a bụ ụzọ mara mma nke na-agafe mpaghara eke dị n'akụkụ osimiri ahụ, ọ dịkwa oke ọrụ ma enweghị nnukwu nsogbu, yabụ ọ dị mma maka ezinụlọ dum. N’okporo ụzọ a, enwere ihe karịrị 50, ọ bụ ezie na ọtụtụ n’ime ha agbahapụla ma ewughachi ha. Na ngwụsị njem ahụ, ị ​​ga-erute otu ụlọ okpukpe dị mkpa: ebe obibi ndị mọnk nke Armenteira. Routezọ zuru ezu bụ kilomita asaa, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na anyị ga-eme ya azụ na azụ anyị ga-eburu n'uche na e nwere 14 na ọ na-ewe site na elekere anọ ruo isii dabere na ngwa ngwa anyị ji eme njem ahụ. Na mbido, ọ bụghị ihe na-atọ ụtọ ma enwere ndị mmadụ sonyere na ịrị elu nke Armenteira, mgbe ha na-agagharị n'okporo ụzọ awara awara.
Knownzọ a maara dị ka O Fuciño do Porco dị nso na Viveiro, na O Vicedo ebe na nso ihe a maara dị ka osimiri Katidral dị na mari ina nke Lugo. Ebe a amachaghị nke ọma ma ọ nwere ọmarịcha mma, n'ihi na ọ bụ ụzọ dị n'etiti ugwu, nwere echiche dị egwu banyere oke osimiri. Routezọ a dị mkpụmkpụ, ihe dịka kilomita, mana ihe dị mkpụmkpụ dị ịtụnanya. Okirikiri ala dị ịtụnanya ma hapụ onye ọ bụla na-enweghị mmasị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịga n’ihu karịa ịmara mpaghara ahụ, anyị nwere ike ịpasa n’akụkụ osimiri Abrela wee were ụkwụ were ụkwụ gaa ụkwụ, nke dị ihe dị ka kilomita asaa, ebe mpaghara ahụ mara ezigbo mma ma nwee okporo ụzọ ndị a na-eteghị ete.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Uniquezọ njem njem atọ pụrụ iche na Galicia